Erdogan Oo Ku Hanjabay Inuu Sii Ballaarin Doono Xidhiidhka Ruushka - Ilays News
Erdogan Oo Ku Hanjabay Inuu Sii Ballaarin Doono Xidhiidhka Ruushka
Ankara (Ilays-News):- Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku gooddinaya inuu sii xoojin doono xiriirka milateri ee kala dhexeeya xukuumadda Moscow haddii Mareykanku uusan qaadin cunaqabateynta saaran iibka diyaaradda dagaalka ee muhiimka ah.
Digniinta ayaa imaanaysa ka hor kulanka la qorsheeyaya inuu toddobaadka soo socda dhex maro u dhexeeya Erdogan iyo Madaxweyne Donald Trump.
Turkiga ayaa lagu wadaa inuu iibsado diyaaradda dagaalka ee ah noocii u dambeeyay ee Ruushka lagu farsameeyay ee noocedu yahay Su-35. Wadanka ayaa horeyba uga xanaajiyay xulafadiisa reer galbeedka isaga oo ka soo iibsaday nidaamka gantaalaha Ruushka ee S-400.
“Markii aan iibsannay S-400, qofna ma aanan weydiisan [ogolaansho]. Marka, haddii aan go’aan qaadanno waan iibsan doonnaa [Su-35],” ayuu yiri Erdogan maalintii Talaadada.